NextMping | White Pepa
NextMping™ Ramangwana reBasa Machena Mapepa
PaNeMMping tiri kuita research inoenderera pazvinhu zvese ramangwana rebasa. Mapepa edu Machena anosanganisira kutsvaga nezve AI, otomatiki uye marobhoti pamwe nematambudziko ebasa akatarisana nemabhizinesi nhasi.
NEW! Wepamusoro 20 Remangwana Work Trends 2020
Wepamusoro 20 Remangwana Rekushanda Trends 2020
PaNeMMping™ kutsvagisa kwedu kwakanangana nehurongwa hwedu hwekudyara, iyo PREDICT modhi yakatsanangurwa mune rakanyanya kutengesa, "NextMapping - Fungidzira, Fambisa uye Gadzira Ramangwana reBasa."
Iyo PREDICT modhi ine 7 matanho ezvinodzikisira maitiro ekupa zvirongwa zvekunzwisisa zvevatungamiriri, zvikwata uye mabhizinesi. Muenzaniso wePREDICT unopa dhizaini yekubatsira kugadzira ramangwana idzva rebasa rinowirirana nezano nezviito.
Uyu mushumo unoregedza tsvagiridzo uye KUTI ubatsire vatungamiriri, zvikwata, vatengesi uye mabhizinesi kuti vagadzire ramangwana!
Kufungazve Kubatira & Kuchengetedza mune Ramangwana reBasa
Imwe yezvinotarisa kumabhizinesi mu2019 uye nekupfuura mu2020 iri kutsvaga, kubhadhara nekuchengeta vanhu vakanaka.
Vatungamiriri vanonetsekana nekuwana vane hunyanzvi uye vakagadzirira kushanda vanhu. Vanotungamira vanopikiswawo nemabatiro ekuita vanhu vane tarenda mubhiri.
Ichokwadi ndechekuti vatungamiriri vava kukwikwidza nezvinhu zvakawanda zvine chekuita nekutora - makwikwi haasi mamwe makambani, vashandi vega.
Iwo matipi akashanda kwemakore haangashande iye zvino kana mune ramangwana. Mafungiro ari kuchinja uye chizvarwa chino chevashandi hachisi kutsvaga zvakanyanya 'mabasa' kana 'mabasa' sezvo vari kutsvaga mapurojekiti ane basa, mikana yebasa-mukana, yakagovaniswa mikana yebasa, basa rekure uye nezvimwe.
Mune ino yakazara yeWhite White Pepa, isu tinopa iyo data, yekutsvagisa uye anecdotes ekuti ungave uri pamucheto unotungamira wekunyora nekuchengetedza tarenda yepamusoro
Kana Marobhoti ari iro Ramangwana reBasa - Chii Chiri Kunotevera Kune Vanhu?
Vazhinji vezve future future vanotarisa pane dystopian maonero yenguva yemberi apo tichava tichishandira uye tichigara mune inozivikanwa vanhu robhoti.
Kune zvakare kutsvagira kunovimbisa kuti isu sevanhu tinogona kuona mashandisiro atinoita marobhoti, otomatiki uye AI uye kwatiri kuti tishandise tekinoroji yekugadzira hupenyu huri nani uye shandai chokwadi kumunhu wese wepanyika.
Iri chena pepa rinopa ese maviri maonero uye rinokutendera iwe kusarudza ramangwana raunoda kuumba.